Programmer's Diary: ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်အား အမိန့်ချလိုက်ပြီ
အခုလောက် များလိမ့်မယ် ထင်မထားဘူး။ အနှစ် ၂၀ နဲ့ ၆ လ တဲ့။ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးတွေ အဲလိုများ ထောင်ချခံရလို့ရှိရင် ဘယ်လိုများ နေမလဲလို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို မေးချင်တယ်။ မိုးကောင်းတုန်း ရွာထားလို့ မပြောတော့ဘူး။ မုန်တိုင်းအောက်က လွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ့် နေ့ရက်တွေကိုပဲ အရောက်သွားကြဖို့ လိုတော့တယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 9:11 PM
ကဏ္ဍ - Blogger, News
နေဘုန်းလတ်အဖြစ်မှာတော့ အပြစ်မရှိသူ လူငယ်တယောက်ကို သက်သက် အညွန့်ချိုးပစ်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။ နအဖ လုပ်နေကျ အော့နှလုံးနာစဖွယ်လုပ်ရပ်ပါဘဲ။
နေဘုန်းလတ်နဲ့တကွ မတရားအကျဉ်းချခံထားသူတွေအကြောင်းကို စဉ်းစားမိတိုင်း ကျနော် ၀မ်းလည်း ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဒေါသလည်းထွက်တယ်။ ခံပြင်းတယ်။ ကမ္ဘာမကြေဘူးဗျာ။
မတရားမှုဟာ ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကနေ ခံစားကြည့်ရင် အင်မတန် ကြေကွဲဘို့၊ နာကျည်းဘို့၊ ခံပြင်းဘို့ ကောင်းလှပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ပြောစရာ စကားတွေတောင် ခန်းနေတယ် ညီညီ
November 10, 2008 10:38 PM
အငြိုးအာဃာတ ကြီးမားလိုက်တာနော်။ လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘ၀ထဲက အချိုမြိန်ဆုံးအချိန် နှစ်၂၀လောက်ရွေးဖယ်လိုက်ပြီးရင် ဘာတွေကျန်ပါတော့မလဲဟင်
ရင်ထဲမှာ စာနာ ခံပြင်းမှုတွေနဲ့နင့်နေအောင်ခံစားနေရပါတယ်။
YIT mhar khin khat ya dae sate htar kg tat ko nay myo ah twat...sakar lone shar ma ya aung ko sate ma kg phit mi par dae...bar lo di lout hti yat sat kya dar par lae??? 20 years so dar lu ta yout yat Bawa 1/3 naw...
Nyi Ma Lay (Junior) said...
YIT ka ah ko ta yout...
Really feel sorry for you...
Really don't understand to them...
Do they have human mind or not?
kalay lay ta yaunt daung adult pyit naing det karla ta khu ko nae del htin lar ma thi bu
မုန်တိုင်းအောက်က လွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ့် နေ့ရက်တွေကိုပဲ အရောက်သွားမယ် အမြန်သွားမယ် အမြန်ပြန်ှဆုံချင်တယ်လေ
November 13, 2008 10:34 PM
ကမ္ဘာပေါ်က တချို.သော ဘလော့ဂါတွေကလည်း ထပ်တူတပ်မျှ ခံစားကြပါတယ်။
http://keithmh.wordpress.com/2008/11/12/an-apology-first/ ( Poem including link for his news )